Zeyar Lynn | လမ်းအိုလေး
Tag Archives: Zeyar Lynn
by lanolay	Leaveacomment
ဖုန်တွေနဲ့အတူ မင်းကိုယ့်ကို စောင့်မျှော်လို့နေတယ် (﻿ဇေယျာလင်း)
(မိမိပြန်အလာကို ﻿နေ့စဉ်စောင့်မျှော်ရှာတဲ့ ဇနီးသို့)
ကိုယ်တို့အိမ်က ဖုန်တွေနဲ့ပဲအတူ ﻿မျှော်လင့်လို့။
အထပ်လိုက် အထပ်လိုက် ဖုန်တွေ
ထောင့်တိုင်းမှာ ဖုန်တွေဟာ လျှံကျလို့။
ဖုန်တွေရဲ့ ငြိမ်သက်မှုကို အလင်းတွေနှောင့်ယှက်လိုက်မှာ
စာအုပ်စင်ပေါ်မှာ လက်ရေးနဲ့ရေးထားတဲ့ လေဘယ်လ်ဟာ
ကလောင်သွားဟာ ဖုန်တက်နေတာ ချစ်စရာ
ကိုယ့်မျက်လုံးတွေကို နာကျင်မှုဟာ ဓားလိုထိုးတယ်။
အဲဒီမှာမင်း တစ်နေကုန်တစ်နေခန်း ထိုင်တယ်
မင်းခြေလှမ်းတွေဟာ ဖုန်တွေကို နင်းချေမိမှာ စိုးရိမ်လို့
အသက်ကိုတောင် ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်း မင်းရှူတယ်
တိတ်ဆိတ်မှုကို သုံးစွဲပြီး ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်မင်းရေးတယ်
ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာ အသက်﻿ရှူကြပ်စေတဲ့ ဖုန်တွေဟာပဲ
Categories: Kabyarz | Tags: ဘာသာပြန်, ဇေယျာလင်း, Kabyarz, lanolay, Liu Xiaobo, Zeyar Lynn | Permalink.
ဈာန်ဝင်စားမှု ၁၀ခု (ဇေယျာလင်း)
‘ကဗျာဆရာဆိုတာ ချောက်ကမ်းပါးထိပ်ကနေ ခုန်ဆင်းချလိုက်တဲ့ ကာတွန်းဇာတ်ကောင်နဲ့လည်း တူရဲ့။ ကာတွန်းဆိုတော့ ဇာတ်ကောင်ကလည်း အောက်ကျမသွားပဲ လေထဲ ဝဲနေတာပေါ့။ ဘယ်အချိန်မှာမှ ကျသွားသလဲ​ဆိုတော့ သူ့ဒုက္ခ​ဟာ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ မကိုက်ညီဘူးလို့ သဘောပေါက်လိုက်​မိချိန်မှာ ဖြစ်တယ်။ ကဗျာဆရာ​အဖို့တော့ သူ့ရဲ့ စိတ်ကူး​ဖြန့်ကြက်နိုင်စွမ်းဟာ သူ့ကို လေထဲ ဝဲနေစေတာ ဖြစ်တယ်။ အဲသလို ဝဲနေတာမို့လို့လဲ ရှုခင်းကို ပိုကျယ်ကျယ်​ ပြန့်ပြန့်​လေး မြင်ရတာ​ဖြစ်တယ်။ ဖတ်သူဘက်က​ကြည့်ရင် ချောက်ကမ်းပဲထဲ ပြုတ်ကျရလိမ့်မယ်လို့ ဧကန်မုချ သိနေပေမယ့် အဲသလို ပြုတ်ကျမယ့်​အချိန်ကို ရွှေ့ဆိုင်း​ထားလိုက်ခြင်းဟာ ဖတ်သူကို နှစ်လိုဖွယ် ဆွဲဆောင်​ထားလိုက်တာ ဖြစ်တယ်’
(A Andaman’s Review of ‘Fall Higher’)
စွပ်ပြုတ်လုပ်ဖို့ သင် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သင့်မှာ ကြက်သွန်နီလည်း မရှိ၊ မုန်လာဥဝါလည်း မရှိ။
ကြက်သားလည်း မရှိ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်လည်း မရှိ၊ တရုတ်နံနံလည်း မရှိ။
ရေနဲ့ ဆားတော့ သင့်မှာ ရှိတယ်။
ဆယ်မိနစ် ပြုတ်။ ခူးခပ်ထည့်။
ပြီးရင် ဟောဒီ စွပ်ပြုတ်ရိုးရိုးနဲ့ပဲ
အကောင်းဆုံးလက်ရာ ဖန်တီးဖို့ သင် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သင့်မှာ ပန်းချီဆေးလည်း မရှိ၊ စူးလည်း မရှိ၊
ပါရမီလည်း မရှိ၊ စက္ကူလည်း မရှိ၊ ပီယာနိုလည်း မရှိ
တုတ်ချောင်းလေးတွေ ခဲဖျက်လေးတွေလည်း မရှိ။
လေတော့ သင့်မှာ ရှိတယ်။
သံသယဖြစ်ဖွယ်ရာ ဘာမှမရှိဘူး၊ သေချာတယ်
နတ်ဘုရားတစ်ပါး ပြုလုပ်ဖို့ သင် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သင့်မှာ ဘာပညတ်တော်မှလည်း မရှိ၊
ရီနေးဆန့်စ်ခေတ် ဘုရားစင် နောက်ခံနံရံပန်းချီ မရှိ၊
ဘယ်သူတော်စင် ဓာတ်တော်မွေတော် မရှိ၊ အခွန်ဆောင်စရာ
မလိုတဲ့ တီဗီ ဧဝံဂေလိ တရားဟောဆရာတွေ၊ ထူးထူးဆန်းဆန်း
စွမ်းပါ့ကွာ၊ နတ်ဘုရားတွေဟာ ဝေါ့လ်တ်ဝှစ်တမင်းန်လို
သင့်ချစ်သူကို ဖွင့်ပြောလိုက်ဖို့ သင် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သူနဲ့ ဆက်ဆံရတာ ဘယ်လောက်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ
ဒါပေမယ့် သင်ပြီးတော့မယ့် အချိန်မှာပဲ
ချစ်သူရဲ့ ရင်သီးလေးတွေဟာ သင့် လက်ဖဝါးအောက်မှာ
ပုလဲလုံးလေးတွေလို မာတောင်နေတဲ့ အချိန်မှာပေါ့၊
သင့်စိတ်ထဲ ဖြစ်တာ သင်သိတာက
ဒီထက် ပိုနက်ရှိုင်းတဲ့ အရာတစ်ခုခု သင်ချစ်နေတယ်ဆိုတာ။
ပန်းတစ်ပွင့်ပြုလုပ်ဖို့ သင် ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
သင့်မှာ သစ်စေ့မရှိ၊ ပျား မရှိ၊ လင်းနို့ချေး မရှိ၊
ကျောက်သားကမ္ပည်းထိုးပုံ၊ ကောက်ဆွ၊ နေရောင်ခြည်၊
ခံစားမှုတစ်ခုတော့ သင့်မှာ ရှိတယ်။
Categories: Kabyarz | Tags: ဘာသာပြန်, ဇေယျာလင်း, Dean Young, Kabyarz, Zeyar Lynn | Permalink.
ကစားစရာ ပီယာနိုသို့ တမ်းချင်း (ဇေယျာလင်း)
ကဲနက်သ်ကတော့ တီထွင်ဖန်တီးတဲ့ ကဗျာတွေရေးလို့။ သူ့ကဗျာပုဒ်တွေ ဖတ်ရရင် အဲဒီ​ကဗျာပုဒ်တွေထဲမှာ ပျော်ရွှင်မှု​တစ်ခုကို ရနေတယ်။ ကဗျာပုဒ် ရေးသား​ပြုလုပ်ခြင်းရဲ့ ပျော်ရွှင်မှု။ အဲဒီ​ပျော်ရွှင်မှုက ဖတ်သူကိုပါ ကူးစက်စေတယ်။ ကဗျာဟာ နာကျင်မှု ဝေဒနာတွေ​အကြောင်းပဲ ရေးစရာ​​မဟုတ်ပါဘူး။
(Pedestal Magazine တွင် ဖော်ပြပါရှိသည့် Lee Rossi အင်တာဗျူးမှ)
လက်တွေကို ဖြတ်ပစ်လိုက်ဖို့ မလိုပါဘူး။
ပန်းစည်းကို ကောက်စားစရာလည်း မလိုဘူး။
ဦးခေါင်းဟာ မက်မွန်စေ့ ဖြစ်သွားတယ်။
မီးစွဲနေတဲ့ စာခြောက်ရုပ် (ဇေယျာလင်း)
မှန်နေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုဟာလည်း ရှိနေပြန်တယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတော့ တစ်နေရာကနေ တစ်နေရာ မရွေ့တဲ့ ကဗျာဟာ အသက်မရှိဘူးဗျ။ အဲသလို ရွေ့မှလည်းပဲ ကဗျာရဲ့ သက်ရောက်မှုက ဖြစ်တာ။ ကျောက်ခဲနဲ့ ပုတ်သင်ညိုကို ဘယ်လိုခွဲခြားသလဲ။ ပုတ်သင်ညိုကို ပြေးအောင်လုပ်တဲ့ တစ်နည်းပဲရှိတယ်။ ကျောက်ခဲက ဘယ်လိုမှ လှုပ်မှာမဟုတ်ဘူး။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားဖို့ တွေးမိဖူးလိမ့်မယ်။
ရထားသံလမ်းဟာ အဲဒီကို ဦးတည်တယ်၊ တောအုပ်လေးထဲ
သစ်သားတံခါးတွေ။ အရင်ဆုံး ကိုယ်လုပ်ချင်တာက မင်းရဲ့လက်ထဲ
ပစ္စည်းသေးသေးလေးတစ်ခု ထည့်ဖို့၊ ကြယ်သီးတစ်လုံးဖြစ်ဖြစ်၊
မြစ်ထဲက ကျောက်စလစ်လေးဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် ဘာကိုဖွင့်ရမှန်း
မသိတဲ့ သော့တစ်ချောင်း။ သုဿ န်နဲ့ အဲဒီမှာရှိတဲ့ အိန်ဂျယ်အမည်းရဲ့
ဆန့်ကျင်ဘက်ကအိမ်ဟာ ကိုယ့်အိမ်မဟုတ်တော့ဘူး။ ကောင်းမွန်
မှန်ကန်စွာ ခွဲခွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောခြင်းဆိုတာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။
အိုင်အိုးဝါးမှာ နောက်ဆုံးနေခဲ့တုန်းက အအေးဓာတ်ဟာ ၁၀ဒီဂရီ
အောက် ရောက်နေတာတောင်မှ မီးဖိုချောင်ထဲမှာ စိတ်ရွှင်လန်းစရာ
အနက်ရောင် အစက်အပြောက်ရှိတဲ့ အနီရောင် ချေးပိုးထိုးတစ်ကောင်
နှစ်ကောင်တော့ တွေ့ရတတ်သေးတာပဲ။ နထ္ထိကြီးထဲ ပြုတ်ကျသွားဖို့
မိမိတို့အားလုံးဟာ ဇောက်ထိုးတွဲလောင်း ဖြစ်နေကြတာပါပဲလား။
အနီးကပ်ကြည့်တော့မှ မြင်ရတာဟာ တစ်ယောက်ယောက် အပေါက် Continue reading →
စစ်ပြန်စစ်မှုထမ်းဟောင်းတို့ရဲ့ ဘဝ (ဇေယျာလင်း)
ဘီဇမ်တီယမ်ဆိုတာ တစ်ခါတုန်းက ဘော့စ်ပိုရပ်စ် ရေလက်ကြားက
မြို့ပြကြီးတစ်ခုပေါ့၊ စကားပြောတဲ့ ရေတံခွန်တွေကြောင့် နာမည်ကြီးခဲ့တယ်။
ပထမကမ္ဘာစစ်ဟာ အားလုံးကို အငွေ့ပျံသွားစေတယ်။
အဲဒီတုန်းက တကယ့်ကို ကြေကွဲဝမ်းနည်းစရာ အကောင်းဆုံးပဲ
လန်ဒန်နဲ့ဘာလင်မှာ ယောက်ျားတွေဟာ ထော့နဲ့ထော့နဲ့ လျှောက်ကြတယ်
သူတို့ရဲ့ လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေထဲမှာ ပထမကမ္ဘာစစ်ကြီးရဲ့ ဗုံးဆန်တွေ
ငေါထွက်လို့။ အချို့ ပြန်ရောက်လာကြတယ်၊ သူတို့ဦးနှောက်ရဲ့
ဟစ်ပိုကမ်းပတ်စ်ထဲမှာ အန္ဓသီချင်းအတိုအစတွေ ထုတ်မရအောင် ညပ်လို့။
အချို့လည်း အဝတ်စိုရွှဲတွေနဲ့ နာရီပေါင်းများစွာ လမ်းသလားကြတယ်
ရဲလိုက်ရင်လည်း အနှေးဆုံးနှုန်းနဲ့ ပြေးလို့။
ဒါတွေဟာ ရုပ်သံပေါ်မလာသေးခင်ကပေါ့၊ လူတွေဟာ မီးပုံထဲပဲ ကြည့်ရတယ်
မီးပုံထဲတွေ့ရတာတွေကို ပြန်ပြောကြတာကိုပဲ ဖျော်ဖြေမှုလို့ ခေါ်ကြတယ်။
ငရဲကို လူပေါင်းများစွာ တွေ့ခဲ့ကြလေတယ်။
သူတို့ဘဝဟာ ငါတို့လက်ရှိဘဝထက် ပိုကောင်းခဲ့ကြသလား။
အဲဒီတုန်းက မိန်းမတစ်ယောက် ဆေးလိပ်သောက်တယ်ဆိုရင်ပဲ
လူပုံလယ်မှာ ကိုယ်တုံးလုံးချွတ်ချလိုက်သလိုပဲဆိုတော့ ပျော်စရာပေါ့။ Continue reading →
ပင်လယ်အောက် ရေငုတ်သမားတို့ရဲ့ ဘဝ (ဇေယျာလင်း)
ဆင်းရမယ့်မှတ်တိုင်နဲ့ လွဲလွဲသွားလို့ တဝဲလည်လည်ပဲ
ပြန်ပြန်ရောက်လာနေပြီး ငါးပြတိုက်ထဲမှာ ကိုယ် နိုးထလာနေရပေါ့။
မင်းနဲ့ ပြန်တွေ့ရဖို့ သိပ်တော့ လွယ်မှာမဟုတ်တော့ဘူး။
အဲဒီကို ကိုယ်ဘယ်တော့မှ ပြန်ရောက်လာနိုင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။
ကိုယ့်ရဲ့ အိုဗာကုတ်ကြီး ပျောက်သွားတယ်။
နှစ်ပေါင်းအတော်ကြာပြီးတော့လည်း ခေါင်းကိုက်တာ မပျောက်ဘူး။
အဖေပြောတာကတော့ ကိုယ်လုပ်ပုံ လွဲနေသတဲ့။
ကိုယ်ဟာ တစ်ယောက်ယောက်ကို မတော်တဆ သတ်ပစ်လိုက်မိပြီ၊
အားလုံးဟာ သံချေးတက်နေတဲ့ အနံ့ပဲ။
အခြားခန်းမထဲမှာ ငြင်းခုံနေကြတဲ့ စကားသံတွေ၊
အဝတ်စုတ်ပုံက ယိုစိမ့်တဲ့နေရာမှာ ငှက်တွေ။
နောက်ဖေးလမ်းကြားတစ်ခုထဲ လျှောက်သွားတော့ ပြတင်း
တစ်ပေါက်ကနေ တစ်ယောက်ယောက်က အော်ခေါ်လိုက်တယ်၊
ပြီး၊ နောက်တစ်ယောက်၊ နောက်ကလိုက်လို့။
ပန်းချီဆရာတွေရဲ့ ဘဝတွေ (ဇေယျာလင်း)
ကိုယ့်ညီအစ်ကို မောင်နှမတွေကို ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက်
စားသောက်ပစ်လိုက်တယ်။ သူတို့လည်း ကိုယ့်လိုပဲ
လုပ်ကြမှာပါပဲ။ အဲသလိုမှ မလုပ်ရင် ဘယ်လိုကြီးထွားရမှာလဲ။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ်ဆိုတာ ဘယ်သူလဲ။
ကိုယ့်အမေကို ကိုယ် ဘယ်တော့မှ မတွေ့ချင်တော့ဘူး။
ကိုယ်ဟာ တစ်ခုခု လိုအပ်နေပြီဆိုရင် ကိုယ့်မှာ ဒဏ်ရာတစ်ခုခု
ရှိနေလို့ပဲ။ ကိုယ်ဘယ်တော့မှ မတွေ့ချင်တော့တဲ့ ကိုယ့်အဖေဟာ
ကိုယ်တွားသွားနေတာ နည်းသေးတယ်ဆိုပြီး ကိုယ့်ရွှေရောင်ဖင်စီခံကို
ဆုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တယ်၊ ပြီးတော့မှ နောင်တရပြီး ကိုယ့်ကို
မျက်နှာပြင်ကြမ်းတဲ့ လက်အိတ်ဆယ့်ငါးစုံ ပေးခဲ့တယ်။
ကိုယ်အခု လေးလေးလံလံ ပစ်လဲကျရတာကို ကြိုက်နေမိပြီ။
မင်းဟာ ကိုယ့်အတွက် ရည်စူးထားသူ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
နွေရာသီမှာ ဝမ်းအနည်းဆုံးပဲ အခုဆို ပိုပိုဆိုးလာနေပြီပေါ့။
တစ်ခါက ကိုယ့်အပေါ် နားလည်မှုရှိတယ်လို့ ထင်ထားမိသူတစ်ယောက်ကို Continue reading →
မှော်အတတ်ပညာကို ယုံကြည်ခြင်း (ဇေယျာလင်း)
ယောက်ျားတစ်ယောက် ပီယာနိုရှိရာဆီ လျှောက်သွားပြီး
လူရော ပီယာနိုပါ မသေကြတာကို မြင်ပြီးမှ။
ခွက်ထဲက ဝိုင် အပိုင်းပိုင်း အစစ မကွဲသွားတာ မြင်ပြီးမှ။
ဗွက်အိုင်လေးတွေထဲ သက်တံတွေ မြင်ပြီးမှ။
ခွေးလေခွေးလွင့်တွေရဲ့ ကိုယ့်ကို မှတ်မိနေကြခြင်းနဲ့ ကြုံကြိုက်ပြီးမှ။
ပကတိ အရှိတရားမှာ ‘အကယ်၍’ ၆၅% ပါရှိတယ်ဆိုတာ
ရေတံခွန်တွေဟာ စိတ်ထဲမှာပဲ ရှိကြတယ်။
မိမိတို့အားလုံးဟာ နွံထဲကလာကြတာ ဖြစ်တယ်။
တောင်အမေရိကက လားမားအကောင်တွေလည်း ထို့အတူပဲ။
မိမိတို့ကို သလင်းကျောက်တွေ ဝန်းရံထားတာကို ကိုယ်ယုံတယ်။
သေပြီးရင် ဘာအသွင်သဏ္ဍာန် (ဇေယျာလင်း)
သေပြီးရင် ဘာအသွင်သဏ္ဍာန် ကိုယ်တို့ယူကြမလဲ
ဝီလျမ်ဘတ္တလာ ယေးတ်စ်လို စက်ငှက်ရုပ်လား။
ကိုယ်တော့မထင်။ ယုန်ရုပ် တံတခါခုတုံးကော၊ ချားလ်စတန်မြို့မှာ
ကိုယ်တို့တွေ့ခဲ့တဲ့ဟာလေ၊ လိုချင်ပေမဲ့ ပိုက်ဆံမရှိခဲ့ကြတာ။
ခဲနဲ့လုပ်တာလို့ ထင်ရလောက်အောင် အလေးကြီး၊ လူတွေ ပွတ်လွန်းလို့
ခေါင်းထိပ်က ဆေးတွေတောင်ကွာနေပြီ၊ ဖွင့်ထားတဲ့ တံခါးကြားမှာ
ခုထားလိုက်ရင် ဘယ်လောက်ပြင်းတဲ့လေဖြစ်ဖြစ် တံခါးကို စောင့်ပိတ်လို့
ရမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဟင့်အင်း မိုးဟာ အပိုင်းပိုင်း အစစ စုတ်ဖြဲထားတဲ့
တံလျှပ်တွေလို ထွက်လာတယ်။ ကိုယ်တို့ သေပြီးရင် ဘယ်ရောက်သွား
ကြမှာလဲ၊ ကိုယ်လည်း သိတာမဟုတ်ဘူး၊ စုန်းပူးနတ်ဝင် ဓာတ်စီးချိန်မှာ
ကူးစက်တဲ့ ဓာတ်တစ်မျိုးဆိုင်ရာ သတ္တုဗေဒရဲ့ မီးပြင်းဖိုထဲလား၊
ဒါမှမဟုတ် ဒွိစုံဖိုမအင်္ဂါ လိင်ပျော်ကျူးပွဲကြီးတစ်ခုနဲ့ တစ်ခုကြား
အလုပ်လုပ်ကြတဲ့ လောက်တွေရဲ့ မြေဆွေးတွင်းထဲလား၊ ရာဘာမြွေရုပ်တွေ
မှုတ်ဖို့နဲ့ ပင်းန်ဘောလ် ကစားဖို့ သားကို ဒေါ်လာ ၂၀ ပေးခဲု့ဖူးတဲ့
နှုတ်ခမ်းမွေးပိုင်ရှင် ကြီးတော် အန်တီ ဂလော်ရီယာရေ၊ အန်တီကော
မြူမှိုင်းရဲ့ သားတော် (ဇေယျာလင်း)
မြူမှိုင်းဟာ လောင်ကျွမ်းသွားပြီး လေထုဟာ
ထာဝရရဲ့ ကျွန်းတွေကို ဟောဟိုအဝေးမှာ တွေ့လို့ရတယ်
— အဲဒါဟာ ကိုယ့်အတွက် သိပ်ပြဇာတ်ဆန်လွန်းတယ်။ ကြည့်ရင်လည်း
ကိုယ့်မျက်လုံးတွေနောက်မှာရှိတဲ့ စဖီနွိုဒ်နားက တစ်ခုခုမှာ
နာသလို သွားဖြစ်တယ်၊ မကြိုက်ဘူး။ မြူမှိုင်းနောက်မှာ မြူမှိုင်း
ရှိတာ၊ မီးစွဲမလောင်တဲ့ မြူမှိုင်းရှိတာကိုပဲ ကြိုက်တယ်။
အဲသလိုဆို အလင်းရောင်အတွက် ဘာမှ ပြိုင်ဆိုင်နေစရာ မလိုဘူး၊
သင့်ရဲ့ ရှယ်လီကိုပြိုင်မယ့် ဘိုင်ရွန် ရှိစရာလည်း မလိုဘူး၊ သင့်ရဲ့
အသီနာကို ကြတ်စေမယ့် ဂျူနို ရှိစရာလည်း မလိုဘူး၊
ဘယ်မဟာတံတား ပြောဆိုရေးသားချက်မျိုးလည်း မလိုတော့ဘူး။
ကာတွန်းတွေထဲကလို အတွေးကိုပြတဲ့ ပူဖောင်းတွေထဲမှာ
ဘာစာသားမှ မရှိဘူး။ စစ်ရေးပြ ဘင်ခရာအဖွဲ့ကလည်း
လေ့ကျင့်လို့ မရဘူး၊ ငှက်တောင်မှ တခြားငှက်တစ်ကောင်နဲ့
စကားအခြေအတင်ပြောဖို့ ငါးပေအကွာအဝေးအတွင်း ရှိရတယ်။
သေနေတဲ့ ယင်ကောင်တွေလို၊ ကိုယ်ဟာလည်းပဲ သေခြင်း
တရားရဲ့ ကလေးကစားစရာ ဂျောက်ဂျက်ထဲက အစေ့တွေပဲ ဖြစ်တယ်။
ကုဗတစ် (အုပ်စာတစ်) (ဇော်ဇော်အောင်)
ဇေယျာလင်း ကဗျာစုစည်းမှု [v 1.21] - PDF
lanolay on Faces #1 (Khin Mg Yin)
Sanda Hlaing on Faces #1 (Khin Mg Yin)
လူလုပျမှတျဉာဏျ - ၁၃